Obodo Valencian nwere mmasị na uru enyere site na iji drones n'ọnọdụ mberede | Akụrụngwa n'efu
Obodo Valencian nwere mmasị na uru ndị a na-enye site na iji drones na ọnọdụ mberede
Mgbe ọnwa nke ikpe gachara, ndị ọchịchị nke Obodo Valencian ruru nkwekọrịta a na-enwetụbeghị ụdị ya na Spain, ihe nke June gara aga mere ka ha kwado mgbanwe na ọkwa mpaghara maka Territorial Emergency Plan nke gụnyere usoro iwu ndị ọchịchị dị mkpa ga-eji maka iji drones na ọnọdụ mberede.
Ekele maka otu a anyị maara ụzọ ndị ọchịchị si eme na Community nke Valencia bụ, na nke mbụ, ka a hapụ ha ka ha fee ebe a na-etinye aka ma ọ bụrụ na tupu nkwenye sitere n'aka onye isi akwụkwọ Forward Command Post. Ọ bụrụ na mpaghara ndị ọzọ na-efegharị na mpaghara ahụ, ndị otu niile, gụnyere drones, ga-abụ akụkụ nke Ngalaba Basic maka Nchịkwa nke Drones na / ma ọ bụ Ngwongwo Ikuku.
Obodo Valencian na-emepụta iwu nke ya iji nwee ike iji drones na ọnọdụ mberede
Iwu ohuru a abanyela site na obere Israel Quintanilla, ndị ọrụ nke ngalaba Cartographic Engineering nke Mahadum Polytechnic nke Valencia. Maka akụkụ ya, ọ ga-amata na na mmepe ya na mmekota nke Jose Maria Oliet, nke so na ngalaba okpuru ala nke Iwu Ọhịa nke Mapama nke na-ahụ maka ịkekọrịta ihe mmụta kachasị ọhụrụ mụtara n'iji drones na ọkụ ọkụ.
Dị ka a tụrụ anya ya, eziokwu bụ na ndị isi dị mkpa, lee dịka ọmụmaatụ otu ndị na-agbanyụ ọkụ, ndị uwe ojii, ndị nche obodo, nchekwa obodo ... nwere mmasị karịa inwe ike iji ụdị teknụzụ ọhụrụ a na-ekwe nkwa nke ukwuu n'ụdị ọrụ a , otu, na nke a drones, nke nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka ekele ha nwere ike ịnye echiche dị iche karịa na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Obodo Valencian nwere mmasị na uru ndị a na-enye site na iji drones na ọnọdụ mberede